Topnepalnews.com | रोजगारको सुनिश्चितताका लागि होटेल म्यानेजमेन्ट शिक्षा’
रोजगारको सुनिश्चितताका लागि होटेल म्यानेजमेन्ट शिक्षा’
Posted on: May 02, 2016 | views: 232
भर्खरै बौरिन लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति थिएन । औपचारिक शिक्षाका लागि स्कुल कलेजको त कुरै नगरौं, त्यही समयमा नेपालमै पहिलोपटक पोखरामा नेपाल टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज खुल्यो ।
पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सन् १९९९ मा यस कलेजले होटेल म्यानेजमेन्टको शैक्षिक यात्रा थालेको हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको यस कलेजका १३ ब्याचका सबै विद्यार्थी स्वदेशमा र विदेशमा रोजगारीमा लागिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिँदै आएको यो कलेज अहिले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर (बीबीए) र ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स (बीबीएबीआई) का लागि पनि प्रसिद्ध छ ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले स्वदेशका विभिन्न सहरको साथै जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा रहेका नेपालीको समेत लगानीमा सञ्चालित यस कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय प्रयोगात्मक ल्याब, पुस्तकालय र सुविधासम्पन्न रेस्टुरेन्ट रहेका छन् । विदेशी विद्यार्थीको समेत अध्ययन केन्द्रको रूपमा सञ्चालनका लागि कलेजले अध्ययनको गुणस्तरीयता कायम गरेको छ । यिनै सन्दर्भमा कलेजका अध्यक्ष अशोक पालिखेसँग अन्नपूर्णकर्मी कृष्णमणि बरालले गरेको कुराकानी
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज सञ्चालन गर्न केले प्रेरित गर्‍यो ?
शिक्षा लिएरमात्र हुँदैन, रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने र रोजगारी मिल्ने प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता हामीले महसुस गर्‍यौं । बेरोजगार उत्पादन गर्ने कलेजको विकल्पमा हामीले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजको आवश्यकता महसुस गरेर पोखरा, काठमाडौं, धरान, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा समेत रहेका नेपालीको लगानीमा नेपालमै पहिलोपटक होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज खोल्ने निणर्यमा पुग्यौं । स्वदेशमै होटेल म्यानेजमेन्ट पढाइ हुने कलेज नहुँदा युवा विद्यार्थी चर्को शुल्क खर्चेर विदेशमा पढ्न जाने अवस्था थियो ।
यहाँबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थी कहाँ के गरिरहेका छन् ?
पोखराबाट हालसम्म करिब एक हजार विद्यार्थीले ब्याचलर एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गरेका छन् । पोखरा १८ छिनेडाँडामा स्थापना भएको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजबाट उत्तीर्ण प्रायः सबै विद्यार्थी विभिन्न देशमा रोजगारीमा लागिरहेका छन् । कलेजले सन् २००२ बाट हालसम्म १३ ब्याच विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेको छ । अध्ययनपश्चात् विद्यार्थी पोखरा, काठमाडौंलगायत विदेशमा समेत रोजगारमा गइरहेका छन् ।
कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, स्पेन, जापान, हङकङ, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका देशमा कार्यरत छन् । कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत बढिरहेको छ । यहाँ उत्पादन भएका विद्यार्थीले मासिक दुई लाखसम्म पारि श्रमिक पाउने गरेका छन् ।
विद्यार्थीले नेपाल टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज नै किन रोज्ने ?
स्वदेशमै व्यावसायिक शिक्षाको अभावमा युवा बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अबको पढाइ व्यावसायिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षाले नै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ । अहिलेसम्म प्राविधिक शिक्षाको अभावमा पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई प्राविधिक कलेजको स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइले हामीले प्रयास गरेका हौं । पोखरामा कलेज स्थापना हुनुअगाडि होटेल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
पोखरामा कलेज स्थापना भएपछि अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो । नाफाभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्य हाम्रो छ । यहाँको पढाइमा हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिकतामा बढी जोड दिने भएकाले बजारमा सहजै काम पाउन सकिन्छ । यसैका लागि हो हाम्रो कलेज ।
कलेजको भौतिक अवस्था कस्तो छ ?
पोखरालाई शैक्षिक नगरीको रूपमा स्थापना गराउन तथा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले शिक्षामा लगानी गरेका हौं । प्रशस्त प्रयोगात्मक ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, सभाहल, बास्केटबल कोर्ट, भलिबल कार्ट, सुविधा सम्पन्न रेस्टुराँलगायतका भौतिक संरचना कलेज परिसरमा छन् । यसैले कलेजमा देशका प्रायः सबै ठाउँबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।
बाहिरी मुलुकमा भएको प्रगति र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विद्यार्थीले कसरी थाहा पाउँछन् ?
कलेजले विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउन तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गराउन भारत, मलेसिया, दुबईलगायतका स्थानमा अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा लैजाने गरेको छ, जसका कारण विदेशको अवस्था र गुणस्तरीय सेवाका लागि भइरहेका प्रयोगका बारेमा उनीहरूले थाहा पाउन सक्छन् । त्यसो त इन्टरनेटको सहज पहुँचले विद्यार्थीलाई सजिलो बनाइदिएको छ तैपनि स्थलगत रूपमा भ्रमण गरेर अवालोकन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।
कलेजले होटेल म्यानेजमेन्टबाहेक अरू कक्षा पनि सञ्चालन गरेको छ ?
व्यवस्थापन संकाय भएकाले हामीले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर (बीबीए) र बयाचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स (बीबीएबीआई) का कक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पोखरामा बैंकिङ संघसंस्था डेढ सयभन्दा बढी भएकाले तिनको माग पूरा गर्न बीबीए र बीबीएबीआईका कक्षा सञ्चालन गरेका हौं । यो समयको माग पनि हो । बजारमा जस्तोखाले जनशक्तिको माग हुन्छ त्यही अनुसार पढाइ सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
तपाईंको कलेजको शैक्षिक शुल्क चर्को होला नि ?
हामीले आफ्नै माटोमा खोलेको कलेज भएकाले चर्को शुल्क लिने त कुरै भएन । मैले अघि नै भनिसकें नि, हामीले यसबाट नाफा कमाउन खोजेका छैनौं । पोखरालाई शैक्षिक केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयास हो । यही विषय पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीले चर्को शुल्क बुझाउनुपर्छ । यहाँ नै न्यूनतम शुल्कमा हामीले कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छौं । कलेजले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट दुई र पोखरा विश्वविद्यालयबाट चारजनालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
हरेक सेमेस्टरमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने एकजना विद्यार्थीलाई समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । यहाँका विद्यार्थी बाहिर जानबाट त रोकिएका छन् नै, अब हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई समेत यहाँ ल्याएर पढाउने वातावरणको खोजीमा छौं ।
सुन्दर भविष्यका लागि भौतारिएका विद्यार्थीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाका लागि हामीले समयसमयमा नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिकालगायतका देशबाट तालिम प्राप्त प्रशिक्षक ल्याई कलेजका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई तालिम दिने गरेका छौं । यसबाट शिक्षक, विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउँछन् । हाम्रो कलेज पोखरा विश्वविद्यालयको हरेक दीक्षान्त समारोहमा डिनलिस्टमा पर्न सफल छ ।
पूर्ण प्राविधिक शिक्षा भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ । के विषय पढ्ने अनि भविष्यमा कस्तो जागिर खाने भनेर भौतारिएका युवा पुस्तालाई हामी स्वागत गछौं । तपाईं चाहना राख्नुस्, त्यसलाई हामीले पूरा गराएरै छाड्छौं ।